नेकपाकै जनप्रतिनिधिहरुले मागे मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको राजिनामा : RajdhaniDaily.com
Homeराजनीतिनेकपाकै जनप्रतिनिधिहरुले मागे मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको राजिनामा
गौर । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको राजिनामा माग गरेका छन् । राजीनामा माग गर्ने सबै (उपमेयरसहित दुई तिहाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधि) नेकपाबाट निर्वाचित हुन् ।
संघीय मन्त्रालयले नगरलाई अस्तव्यस्त बनाएर कोरोना फैलाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गरी मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाउदै मन्त्री त्रिपाठीको राजिनामा मागिएको हो । उक्त नगरपालिकामा विगत डेढ महिनामा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरी मन्त्रालयले स्थिति प्रतिकुल बनाएको भन्दै राजिनामा नदिए वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त नगरे नगरपालिकाको कार्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नगर उपप्रमुख परनिया देवीसहित ६ जना वडाध्यक्ष र ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुद्वारा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कोरोना महामारीसंग जुध्नुपर्ने महत्वपूर्ण घडीमा मन्त्रालयबाट सरुवाको नाटक मञ्चन गरी नगरलाई संकटमा पारिएको आरोप लगाएका छन् । अधिकृत नहुँदा क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त भएको र देशमै सबैभन्दा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन उक्त नगरपालिकामा बनेको उनीहरुको आरोप छ ।
‘दुई वर्ष बस्दै नबसेको नगरसभा अधिकृत सिकिन्द्र साहको पहलमा केही महिना अगाडि मात्रै बैठक बसी सर्वसम्मत ढंगले बजेट पारित गरेको थियो । बजेट पारित भई कार्यान्वयनको जटिल अवस्थामा एवं कोरोना सन्त्रास र लकडाउनमा मन्त्रालयबाट सहयोग र सहजीकरण गर्नुको सट्टा निरन्तर हस्तक्षेप गरि अस्तव्यस्त पार्ने कार्य निन्दनीय छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनमा डेढ महिनामा ५ जना हाकिम सरुवा गरि संघीय सरकारले कोरोनाप्रति कति गम्भीर तथा स्थिरता र सुशासनको कस्तो अभ्यास गर्दैछ? आफैमा विचारणीय छ’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘आज संकटपूर्ण अवस्थामा यो नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था दयनीय छ, बजेट खर्च करिबकरिब शून्य छ, राहत र बचाउको कार्य पनि कमजोर नै छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? संघीय मन्त्रालयले नगरलाई अस्तव्यस्त बनाएर कोरोना फैलाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गरी मानवता विरुद्धको अपराध गरेको छ । तसर्थ माननीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यो सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा लिएर नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन जरुरी छ । यदि मन्त्रीले राजिनामा नदिए संघीय सरकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारप्रति जिम्मेवार, कोरोना संक्रमणप्रति गम्भीर तथा स्थिरता र सुशासनको लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने मा. मन्त्रीलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछौं’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस नगरपालिकाको हाकिम सरुवामा मा. मन्त्रीको स्तरबाट भईरहेको अदृश्य चलखेल रोक्न र गलत कार्यको जवाफदेही बनाउन संघीय सरकार खासगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा चितबुझ्दो कदम नचालिए यो नगरपालिका कार्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्न बाध्य हुने व्यवहोरा अनुरोध गर्दछौं ।’